डरलाई कसरी कम गर्ने ? - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips डरलाई कसरी कम गर्ने ?
डरलाई कसरी कम गर्ने ?
प्रत्येक मानिसमा केही न केही क्षमता लुकेको हुन्छ । त्यो क्षमता बाहिर ल्याउन सकियो भने मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा अगाडी बढेर सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । तर त्यो क्षमतालाई बाहिर ल्याउन डराउने, असफल भइने डर, आफूलाई अरुको सामु प्रस्तुत गर्न लाग्ने डर आदि डरले गर्दा कैयौं क्षमतावान मानिसहरु गुमनाम भैरहेका हुन्छन् ।
अपरिचित मानिसहरुसंग बोल्ने र परिचय गर्न अगाडी सर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्।
ऐना अगाडी उभिएर आफ्नो कुरा राख्ने अभ्यास गर्नुहोस्।
काम सुरु गर्दा सुरुवातमा सबै सिकारु नै हुन्छन् भन्ने कुरा सम्झनुहोस्।
आफ्ना दैनिक योजनाहरु बनाउने गर्नुहोस् र आफ्नो प्रगति विवरण बेला-बेलामा मूल्यांकन गर्नुहोस् । यो गर्नाले तपाईंलाई आफूले सुधार गर्नुपर्ने कुराको जानकारी हुन्छ।
गल्तीबाट नडराउनुहोस् । सबै मानिसले कुनै न कुनै समय गल्ती गर्छन् । बरु गल्तीहरुबाट सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्।
समाचार र समाजमा घटेका घटनाबारे अपडेट भैराख्नुहोस्।
नयाँ कुरा सिक्ने चाहना राख्नुहोस्। नयाँ कुरा संग अपडेट रहनु भयो भने तपाईंले आफूलाई अरुको अगाडी बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ।
आफूसंग भएको क्षमतासंग सम्बन्धित मानिसहरु र उनीहरुले गरेका कामबारे जानकारी लिईराख्नुहोस्।
जतिसक्दो धेरै कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने प्रयास गर्नुहोस्।
छलफल तथा अन्तरक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुहोस्। यसले तपाईंमा बोल्ने बानीको विकास हुन्छ।
किताबहरु पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस् । किताब पढ्ने बानीले तपाईंले विचार उत्पादन गर्न सिक्नुहुन्छ र तर्क राख्ने बानीको विकास हुन्छ साथै ज्ञानको दायर पनि बढ्ने हुँदा आत्मविश्वास बढ्छ।
आफ्नो हरेक काम सकेसम्म आफै गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईंमा आत्मविश्वास जाग्दै जान्छ। र, स्वत: डर पनि कम हुन्छ।
सामाजिक संजाल पनि तपाईंको क्षमता प्रस्तुत गर्न सुरुवातको लागि राम्रो ठाउँ बन्न सक्छ । यसमा आफू प्रत्यक्ष रुपमा देखिनु पर्दैन, तपाईंले मानिसहरुको प्रतिक्रिया बुझ्न सक्नुहुन्छ र डर कम हुँदै जान्छ।
आफ्नो प्रतिभालाई कसरि प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारे युट्युबमा भिडियो हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ।
Previousआत्महत्याको प्रयास र साथले जगाइदिएको आत्मविश्वास